कसरी ईमेल मार्केटिंग विशेषज्ञ छनौट गर्ने
शुक्रबार, जनवरी 29, 2010 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 स्कट हार्डडिग्री
भाग एकमा (तपाईंलाई ईमेल मार्केटिंग विशेषज्ञको आवश्यक पर्दछ भने ...) हामीले छलफल गर्‍यौं कहिले र किन यो राम्रो विचार हुन सक्छ विशेषज्ञहरूसँग अनुबंध गर्न, समर्पित, ईमेल मार्केटिंग अनुभव। अब हामी? एक भाँडामा लिनु अघि विचार गर्न मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरूको रूपरेखा लिनेछौं ईमेल मार्केटिंग एजेन्सी, ईमेल मार्केटिंग परामर्शदाता वा इन-हाउस ईमेल मार्केटिंग प्रबन्धक। किन?
सबै प्राय: कम्पनीहरूले उनीहरूको छनौट गलत मापदण्डको आधारमा बनाउँदछन् जसले ह्दय दुखाई, असक्षमता, र हराएको उत्पादकता र डलरको एक महत्वपूर्ण रकमको कारण दिन्छ।
पाँच चीजहरू तपाईंले गर्नु हुँदैन
भौगोलिक रूपमा तपाइँको खोजी सीमित नगर्नुहोस्। हो, विश्वास निर्माण गर्ने सब भन्दा विस्तारित तरिका भनेको अनुहार सम्बन्धी सम्बन्धहरू हो, तर यसको मतलब यो होइन कि भरोसा पनि यसका लागि छुट्टै तट वा महादेशमा निर्माण गर्न सकिँदैन। यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि तपाईले खोज्नु भएको चीज ठीक छ। तपाइँको खोजीलाई शुरूबाट परिभाषित भौगोलिक क्षेत्रमा सीमित गर्न अनावश्यक रूपमा सीमित छ। तपाईंको मार्केटिंग बजेट र जोखिममा आरओआईको साथ, दांवहरू जति उच्च छन्। ईमेल र वेबएक्सको यस दिनमा संचार सजिलो र द्रुत छ। वास्तवमा, जब हामी हाम्रो ग्राहकहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा भेट्छौं (चाहे उनीहरू तदर्थ वा पूर्ण प्रबन्धित सेवाहरूको आवश्यक पर्दछ), बैठकहरू प्राय: केन्द्रित र दक्ष हुन्छन् किनकि हामीले उनीहरूको योजना बनाइसकेका छौं र समय सीमित छ।
आकारको आधारमा पेशेवरहरूको स्क्रिन आउट नगर्नुहोस्। यदि तपाईं सानो कम्पनी हुनुहुन्छ भने तपाईले भाडामा राखिएको बन्दूकको साथ काम गर्न अस्वीकार गर्नु हुँदैन किनभने उनीहरूले बढि सेवाहरू प्रदान गर्दछन् र तपाईंलाई आवश्यक भन्दा बढी अनुभव हुन्छ; निश्चित गर्नुहोस्, तपाई तिनीहरूको लागि ठूलो लाभ केन्द्र नहुन सक्नुहुन्छ तर शायद उनीहरूसँग तपाईंलाई चाहिने सटीक विशेषज्ञता हुन सक्छ।
त्यस्तै, ठूला ग्राहकहरूले साना एजेन्सीहरू वा स्वतन्त्र पेशेवरहरूलाई उनीहरूको विचारबाट बहिष्कार गर्नु हुँदैन। साना पसलहरूको हेलममा प्रतिभावान व्यक्तिसँग स्थानीय ई-मेल मार्केटिंग प्रोफेशनल वा मध्यम-स्तर कर्मचारीहरू भन्दा बढि अनुभव हुन सक्छ जुन तपाईंलाई एक पूर्ण पूर्ण सेवा एजेन्सीमा तोकिनेछ। यो ध्यान, विशेषज्ञता, र विचार महत्व छ।
उद्योगको अनुभवलाई हुनै पर्दैन। मार्केटिंग पेशेवरहरूको धेरै श्रेणी अनुभव संग उद्योग समूह विचारको विषय हुन सक्छ। कुनै एक समूह वा व्यक्तिले कहिल्यै तपाईंको उद्योगको बारेमा थाहा पाउँदैन, त्यसैले तपाईंले उनीहरूलाई के जानेको लागि भाँडा लिनु पर्छ: ईमेल मार्केटिंगको कला र विज्ञान।
मलाई ईमेल मार्केटि beingमा रहन मनपर्ने चीजहरू मध्ये एक भनेको विभिन्न उद्योगहरूमा काम गरेर प्राप्त गरेको विचारहरूको क्रस-परागणण हो। हरेक उद्योग अद्वितीय छ, तर ती सबैले साझा विशेषताहरू साझा गर्दछन्। प्राय: के हामी एक उद्योग मा एक ग्राहकको सेवा के सिक्न को लागी अर्को मा एक ग्राहक को लागी एक नयाँ विचार ट्रिगर।
सट्टा कामको लागि नसोध्नुहोस् (वा मनोरन्जन गर्नुहोस्)। सट्टा अभियान वा परीक्षण एजेन्सी व्यवसाय को बाणे हो, समान ईमेल केन्द्रिकहरु को लागी सही होल्ड। स्प्याक अभियानहरू स्टेरोइडहरू जस्तो हुन्छन्, तिनीहरू प्रायः प्रस्तुतकर्ताहरूलाई ओभरइनफ्लेट गर्छन्? क्षमताहरु। तर विशिष्ट कामको लागि नसोध्नुको सब भन्दा ठूलो कारण यो हो कि सबै भन्दा राम्रो सम्भावनाहरू - जसलाई तपाईं वास्तवमै चाहानुहुन्छ - त्यसले गर्दैन। तिनीहरूसँग छैन। अधिक तिनीहरू तपाईंको लागि सट्टा हुप्स मार्फत उडी दिन इच्छुक छन्, तपाईंलाई श be्कास्पद हुनुपर्दछ। यदि तिनीहरू आफ्नो काम दिन तयार छन् भने त्यहाँ यसको लागि धेरै राम्रो बजार हुनु हुँदैन।
तपाईंको बजेटको बारेमा प्रश्नहरू बेवास्ता नगर्नुहोस्। कसैलाई नभन्नुहोस् कि पैसा (वा बजेट) ले कुरा गर्दैन। प्रत्येक एजेन्सी वा आउटसोर्सरसँग निश्चित ग्राहक बजेट न्यूनतम हुन्छ, अनुभव मार्फत आइपुग्छ र अर्थव्यवस्था र उनीहरूको क्लाइन्ट लोड द्वारा आंशिक रूपमा भविष्यवाणी गरिन्छ। यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ, एक सूचित समीक्षा संचालन गर्न को लागी, तपाइँलाई तपाइँको बजेट के हो वा के हुनुपर्छ भनेर केहि विचार छ। सायद तपाईलाई? तपाईको बजेट प्रारम्भिक घोषणा गरेर वा तपाईले सोच्नुभएको कुरा खुलेरै अप्ठ्यारो भयो होला (तपाईले विकसित गर्नुभएको वेबसाइटलाई याद गर्नुहोस्?) यो हुन्छ। तर सामान्य नियमको रूपमा, जब तपाई इच्छुक सम्भावनाहरू बोल्नुहुन्छ, खुला संवादमा संलग्न हुनुहोस् जब यो तपाइँको बजेटमा आउँदछ। अन्तमा यसले तपाइँको समय, उर्जा र पैसा बचाउनेछ।
त्यसोभए तपाइँ कसरी ईमेल मार्केटिंग पार्टनर छनौट गर्नुपर्छ?
तपाईलाई के आवश्यक छ निर्धारण गर्नुहोस्। तपाईंले गर्न सक्ने सबैभन्दा खराब चीज भनेको जागिरको लागि भाडमा लिनुहोस् र तिनीहरूलाई त्यसो गर्न नदिनुहोस्। के तपाईंलाई अगुवाइ लिने कोही छ वा कोही पछ्याउनको लागि आवश्यक छ? रणनीति वा कार्यान्वयनमा एक विशेषज्ञ विकास गर्न सक्ने एक फर्म? एक सल्लाहकार जसले रमाईलो गर्न मनपराउँछ वा त्यो सबै व्यापार हो? एक कर्मचारी अर्डर लिन को लागी वा कसैले तपाईंको सोचलाई चुनौती दिनेछ?
कुराकानी थाल्नुहोस्। सम्भावनाहरूलाई ईमेल पठाउनुहोस्, वा तिनीहरूलाई कल दिनुहोस्। फोनमा केहि मिनेटहरू सँगै खर्च गर्नुहोस् र तपाईं रसायनशास्त्र र चासोको तत्काल अर्थ प्राप्त गर्नुहुनेछ। उनीहरूको ईतिहासको बारेमा सोध्नुहोस्, उनीहरूको हालको ग्राहकहरु को हुन्, उनीहरुको मुख्य क्षमता के हो।
उनीहरूलाई मुट्ठी भर केस स्टडी समीक्षा गर्न आमन्त्रित गर्नुहोस्। दिमागमा राख्नुहोस् कि तपाईले रिपोर्ट गर्न राम्रो नतीजा छ कि भनेर हेर्दै हुनुहुन्न (ती सबै हुने छ) तर उनीहरू कसरी समाधानमा आइपुगेको पछाडि सोच्नको लागि। तपाइँ तिनीहरूको प्रक्रिया बारे जान्नुहोस्, यो के हो, यसले कसरी काम गर्दछ, र यसले तपाइँको कम्पनी र संस्कृतिमा कसरी फिट हुन सक्छ। यो विधिगत छ? प्रेरणा-आधारित? डाटा चालित?
जब तपाइँ राम्रो फिट फेला पार्नुहुन्छ, तिनीहरूसँग लामो र सफल सम्बन्ध निश्चित गर्न उत्तम तरिका छलफल गर्नुहोस्। क्षतिपूर्ति र सेवाहरूको लागि तपाईंको अपेक्षाहरूमा सहमति गर्न आउनुहोस्। त्यसोभए स्टार्टरको बन्दुक फायर गर्नुहोस् र उनीहरूलाई काम गर्न दिनुहोस्।
टैग: टोली भवनWordPress